Mbanje yemukati kurima | MyWeedSeeds.com
Mbanje mukati kukura
Kukura mbanje kune vanotanga
Mumakore apfuura, kukura kwemukati wembanje kwakakurumidza kuve chiitiko chakakurumbira. Zvikonzero zvekuwedzera uku zvakasiyana nenzvimbo uye nemunhu. Ehezve, zvaisungirwa kuitika kuti rimwe zuva vanhu vachatora izvo zvavaiziva nezvezvirimwa uye nzira dzekukura kukura ...
Ruzhinji ruzivo nezve kurima mbanje
Kana uchitarisa mafomu matatu akajairika ekurima mbanje, iwe unowana mukati, kunze uye greenhouse ichikura. Ndeipi nzira yaunosarudza ingangobikira pasi kune rudzii rwemamiriro ekunze nzvimbo yako ine uye zvinotaurwa nemitemo yako yemunharaunda nezve kurima mbanje. Nyika zhinji dzinogovana ...
Nzira yekurima mbanje nemagetsi emagetsi
Iwe unogona chaizvo kurima mbanje chirimwa mukati uchinge uchishandisa fluorescent mwenje girobhu uye kuburitsa rine simba uye rakakura goho. Kana iwe uchinzwisisa iwo chaiwo macirculon ayo chirimwa chembanje chinopinda nenzira uye chinogona kuratidza ichi nharaunda, iwe uchawana kubudirira. Iwe haugone kuitazve ...
Kubhadhara kushandiswa kwesimba
Vanhu vazhinji vanowanzo shamisika kuti ingani simba rekushandisa mbanje yekukura kamuri ichadya uye kana izvo zvichizokwezva kutarisirwa kwevamiriri vemitemo. Kana iwe usingade kunetseka nezvazvo, saka unogona kutevedzera mashoma matanho akareruka ekugadzirisa mashandisiro nekuchinja zvinhu zvakati wandei pamba pako ...
Iyo sarudzo yekugara uchikohwa
Hazvina mhosva kana iwe uchirima mbanje yako kunze kana mukati, muhari kana mubindu, iko kuravira uye ruzivo zviri nani zvirinani nekuzvigadzirira. Kana iwe uri mumwe wevazhinji vanotenda kuti mapindu anongova emwaka chete, iwe unogona kuona kuti unonakidzwa nawo zvakati wandei kana gadheni rako rikaramba richikwanisa kuburitsa zvese ...
Mepu magetsi ekamuri rako rekukura
Tichatanga kutora chinguva kuti uve nechokwadi chekuti unonzwisisa kuti magetsi ane njodzi uye anofanira kuremekedzwa. Tsaona dzinogona kuuraya, saka ita shuwa yekutora chenjera zvakanyanya paunenge uchisimudza mbanje yekukura kamuri. Kutora nguva yekuona magadzirirwo emagetsi mukati meako chaiko ...
Yakanakisa kushandiswa kwenzvimbo mune yako kukura kabhodhi
Yakajairwa kabhodhi inogona kuputswa kuita zvikamu. Chikamu chepasi chidiki uye chakabatidzwa kwemaawa makumi maviri nemana pazuva, chakabata chirimwa chikuru chembanje nezvose zvakatemwa, uchishandisa mwenje we fluorescent. Chikamu chikuru chepamusoro chakabata mbanje mbesa dziri kutumbuka nekuda kweye gumi nembiri mwenje kutenderera, uye irikushandisa ...
Kura imba yakagadzirirwa
Kwamunokurira mbanje yako zvirimwa zvakakosha, kunyangwe ukasarudza mukati kana kunze. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti unosarudza nzvimbo yakanaka isingawanzoshandiswa, senge yako yepasi, imba yepamusoro kana kabhodhi kadiki. Nzvimbo iri kukura inoda nzvimbo dzemagetsi mukati kana padyo. Iwe unofanirwa kuronga chero kugadziriswa ...
Mbanje kukura mazano
Kana system yako ikashandisa rockwool yembeu dzembanje michero, iwe uchazoda imwe yakasarudzika mhinduro. Iwe uchazoda yako stock solution kuve neTDS / CF yekuverenga pakati pegumi negumi nemaviri, ipapo iwe uchazoda kugadzirisa iyo pH pasi kune pH ye10. Isa izvi muhombodo zvichikubvumidza kuti ushandise dombo rako seyayo ...
pH ivhu chokwadi
Iyo pH nhanho mukati memuti inokanganisa zvakananga kukura kwemuti wembanje pamwe nekuwanikwa kwehutano. Iyo pH mazinga anogona zvakare kukanganisa kugona kwemuti kutora huturu kuburikidza nemidzi yawo. PH mazinga anokwira pamusoro pe7.5 anokonzera manganese [Mn], boron [B], mhangura [C, iron [Fe], uye Zinc [Zn] ions kuve mashoma ...
Kuchinja watts kuva amps uye amps kune watts
Pano iwe unowana mafomula ekushandura simba remagetsi muwatts (W) kuva magetsi emagetsi muamps (A) uye shanduko dzakajairika dze110V ne240V dzinoshandiswa munyika zhinji dzekuMadokero [North America nedzimwe nyika 110 volt / hupfumi hwakajairika hweBritain 240 volt nyika ...